Bahlobo abathandekayo, Ngoku kunanini na ngaphambili, ngeli xesha lesidingo, ukuxhasana kube yinto yethu. Sisonke siqhubela phambili ngomonde kunye nethemba ebusweni bokungaqiniseki. Njengoko sizibhokoxa ukukhusela impilo nentlalo-ntle yethu, singathanda ukwabelana ngendlela yethu ukuthintela ...Funda ngokugqithisileyo »
Molo, wonke umntu, zikho iindaba ezilungileyo zethu sobabini kunye nawe, siphuhlise isimbo esimalunga nesithathu sokulungiswa kwendawo yokulungisa. Imifanekiso yereferensi yakho njengoko, ...Funda ngokugqithisileyo »
Ngokwezibalo, rhoqo ngonyaka kukho abaguli abanesifo se-1,2-1,8 sezigidi, ama-400000-800000 ukusweleka konyaka kunye ne-86,5% yokukhubazeka. Ngokwezibalo zabanye abafundi, phakathi kwabaguli abasindileyo, i-10% yabuya emsebenzini ngaphandle kokhubazeko olucacileyo, ama-40% asala nokukhubazeka kancinci, 40 ...Funda ngokugqithisileyo »
Molo, wonke umntu, zikho iindaba ezilungileyo zethu sobabini kunye nawe, siphuhlise umyili omtsha wesitayile sokulungisa. Imifanekiso yereferensi yakho njengoko, ...Funda ngokugqithisileyo »
Yibhiyozele ngokufudumeleyo intsebenziswano kwezonyango lwaseHongzhu naseRukang ukusayina izivumelwano kwizitulo ezihamba ngamavili. Izikhokelo ezivela kuwo omabini amaqela, uMnu Yang noMnu Lv baya kuyo kwaye bayathembisa ukuba baya kuzama konke okusemandleni abo ukuxhasa izivumelwano ngokuqinileyo. Ukusukela ngoku ukuya phambili, i-Hongzhu yezonyango inokubonelela ngevili ...Funda ngokugqithisileyo »
Iimveliso ezintsha eziza-inflatable lumbar brace
Ixesha lokuposa: Feb-20-2019
Molo, wonke umntu, kukho iindaba ezilungileyo zethu sonke, siphuhlise i-inflatable lumbar brace. Kukho imibala emi-2 yokhetho. Imifanekiso yesalathiso sakho njengoko, Ezi ziimveliso zethu ezintsha, zikhululekile xa unxiba, kwaye zisebenza kakhulu ekukhuliseni iintlungu esinqeni. I-inflatable waistline ibandakanya ...Funda ngokugqithisileyo »
Iimveliso ezintsha eziza kufika-isixhobo esikhulu kakhulu somlomo wesibeleko
Ixesha lokuposa: Disemba-31-2018
Molo, wonke umntu, kukho iindaba ezimnandi kuthi sonke, siphuhlise isixhobo sokuthambisa sentamo esincinci. Kukho imibala emi-4 yokhetho. Imifanekiso yesalathiso sakho njengoko, Ezi ziimveliso zethu ezintsha, zikhululekile xa unxiba, kwaye zisebenza kakhulu ekukhupheleni kwentlungu yentamo. Unyango ...Funda ngokugqithisileyo »
Molo, wonke umntu, kukho iindaba ezimnandi kuthi sonke, siphuhlise isixhobo sokuthambisa sentamo esincinci. Kukho imibala emi-4 yokhetho. Imifanekiso yereferensi yakho njenge, Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha lokuposa: Mar-10-2018
Molo, wonke umntu, zikho iindaba ezilungileyo zethu sobabini kunye nawe, siphuhlise umyili omtsha wesitayile sokulungisa. Imifanekiso yesalathiso sakho njengoko, Ezi ziimveliso zethu ezintsha, zikhululekile kakhulu xa unxiba, kwaye zisebenza kakhulu kwi-posture corrector. Ndiyakholelwa ukuba unokuqonda okuthile: kwi-h ...Funda ngokugqithisileyo »
Iimpawu ezi-7 zokukhusela isinqeni sowasetyhini (2)
Ixesha lokuposa: Jan-10-2018
Qhubeka okwesibini, ukunxiba esinqeni kunomsebenzi othile wokuxhasa kunye nowokuzalisa. Ukunxiba into efanelekileyo yokujikeleza esinqeni kunokususa inxenye yobunzima bomzimba ongaphezulu ngentambo ye-ribs esinqeni. Amandla okusonga kunye nokuqina kwesihlunu sesisu esiveliswa kukujikeleza kwesinqe ...Funda ngokugqithisileyo »
Iimpawu ezi-7 zokukhuseleka esinqeni sowasetyhini
Ixesha lokuposa: Jan-09-2018
Inkxaso ye-Lumbar ingaphezulu kwabasetyhini abahlala phantsi, kuba abafazi abanokuya esikhathini, ukukhulelwa, ukuzala umntwana, ukuncancisa kunye nezinye iimpawu zomzimba, kwaye baneempawu zesifo se-gynecological, ke iintlungu ezisezantsi zokubuyela umva ziimpawu eziqhelekileyo. Ke ukuba ungasikhusela njani ngokufanelekileyo esinqeni sakho ...Funda ngokugqithisileyo »
Indima yesixhobo sentamo yomlomo wesibeleko kunye nendlela yokuphelisa iintlungu zentamo
Ixesha lokuposa: Oct-10-2017
Abasebenzi abamhlophe abanamakhola amhlophe bagcina iintloko zabo ixesha elide, eziya kuthi zibangele ukuba imisipha emva kwentamo idinwe kakhulu, kwaye baya kucinezela bonke amandla adibeneyo kumathambo e-vertebrae yomlomo wesibeleko. Emva kwexesha elide, iya kubangela ukuba i-disc ye-vertebrae yomlomo wesibeleko iphume, ibangele ...Funda ngokugqithisileyo »